Rag weeraray isbitaal si ay ula baxaan meydka ilma yar - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaRag weeraray isbitaal si ay ula baxaan meydka ilma yar
Rag weeraray isbitaal si ay ula baxaan meydka ilma yar
Wadayaasha mootooyinka ayaa buux dhaafiyey Isbitaal ku yaalla dalka Induniisiya iyaga oo tallaabbadaasi kaga soo horjeeda meydka ilma yar oo isbitaalka looga haysto lacagta lagu daweeyey oo aan la bixin.
Wardiansyah wuxuu ka mid yahay wadayaasha mootooyinka taksi ahaan loo isticmaalo oo go’aansaday inuu tallaabba uu qaado isaga oo ka yimid magaalada Padang.
Sawir lagu qaaday taleefanka gacanta ayaa muujinaya dad tira badan oo Isbitaalka ka sii baxaya oo sida meydka Ilmaha yar ee Isbitaalka lagu hastay ee Alif Putr.
Sida ay diinta islaamka qabtana qofka muslimka ah sida caadiga ah markuu dhinto horay ayaa laga aasaa.
Hase yeeshee, waaliddiinta wiilka yar ee lix jirka ee dhintay meydkiisa uu isbitaalka M Djamil uu u sheegay iney meydka wiilkooda la bixi karin ilaa lacagta lagu leeyahay la bixiyo.
Hooyada dhashay wiilka yar ee geeriyooday ayaa farriin ay ku codsaneyso in deynta laga bixiyo waxay soo dhigtay baraha bulshada, wadayaasha mootooyinkana halkaasi ayey ka heleen.
“Waxaan qaadnay tallaabbooyin kaddib marki aan ogaannay qoyska Alif in loo diiday iney wiilkooda aastaan, waxa loo haystaynay ay ahayd 25 milyan oo rupi oo u dhiganta ($1,774) oo doolar,” ayuu yiri Wardiansyah oo u warramayey BBC Indunisia.
“Laamaha ammaanka waxay isku dayeen iney tallaabbadayada naga hor istaagaan, balse kuma guuleysan oo tiradayada ayaa badneyd oo wey xakameyn waayeen.”
Muuqaal dhacdadan laga duubay ayaa noqday mid dalka Induniisya dood ka dhalisay iyada oo si weyn la iisu weydiinayaa adeegga caafimaad ee ay isbitaallada ka helaan waaliddiinta aan awoodin iney lacagaha lagu daweeyo iska bixiyaan.
Dhacdooyinka noocan ah waxay marar badan ka dhacaan isbitaallo iyo gooba caafimaad oo ku yaalla dalka Indonesia, iyada oo ay dhacdo ilma markaa un dhasha lacag ay u qabsadaan isbitaallada.
Madaxweyne Joko Widodo, wuxuu meel mariyey barnaamij caafimaad oo dalka oo dhan ka hirgalayo iyada oo ay muwaaddiniinta dalka oo dhan ay iska diiwaan geliyeen balse barnaamijka uu soo wajaho dhibaatooyin xagga maalgelinta iyada oo dadka saboolka ah qaarkood ay barnaamijkaasi ay weli qayb ka noqon oo ay isdiiwaangelin.
Hooyada dhashay wiilka yar ee ay wadayaasha mootooyinka isbitaalka ka soo sareen Dewi Surya waxay sheegtay ka qoys ahaan iney ku guda jiraan sidi ay barnaamijkaasi caafimaadka qayb uga noqon lahaayeen xilliga uu Alif uu xanuunsanayey.
Wiilka yar waxaa qalliin looga sameeyey jilibka hoostiisa balse wuxuu geeriyooday talaadadi.
“Isbitaalka wuxuu doonayey inaan lacagta bixinno; waxayna maamulka isbitaalka guda galeen sidi aan lacagta u bixin lahayn,” ayey tiri. “Wadayaasha ayaana arrintaa aad uga carooday. Kaddibna meydka Alif xoog ayey isbitaalka ugala soo baxeen.
“Wiilka yar ee geeriyooday Alif oo qoys sabool ah ka soo jeedo waxaa in mudda ah la haystay meydkiisa” ayey tiri iyada oo ilmeyneyso, xilligi la aasayey wiilkeeda.
Isbitaalka ayaa ugu dambeyn arrintaasi raalli gelin ka bixiyey wuxuuna isbitaalka uu ballan qaaday iney arrintan oo kale markale dhici doonin.
Agaasimaha Isbitaalka Yusiwan Yusuf ayaa wuxuu yiri: kharashki loo haystay ilmahaasi yar ee isbitaalka ku dhintay waxaa daboolay guddiga sare ee isbitaalka, dhacdadana wuxuu ku tilmaamay mid isafahan la’aan ku dhacday.
Wuxuuna Mr Yusuf uu cambaareeyey waxa ay wadayaasha mootooyinka isbitaalka ka sameeyeen oo uu ku tilmaamay ‘khatar’.
Wakiil u hadlayey wadayaasha Mootooyinkana waxay goor dambe raalli gelin siiyeen maamulka Isbitaalka iyaga oo ka raalli geliyey waxa dhacay.
“Aniga oo ku hadlaya magaceyga iyo magac saaxibbadey dhacdada raalli gelin ayaan ka bixinaya waxaanna ka shaqeyneynaa sidi aan magaca wanaagsan ee ISbitaalka. Ma garaneyno nidaamka loo maro oo waa uu dheer yahay, waa sababta keentay inan go’aan noocaasi ah u qaadanno,” ayuu yiri Alifiandri.
Jaajuuskii Mareykanka laga musaafuriyay ee Ruushka shaqada laga siiyay